ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့ကွန်တီ - Fox Sports Myanmar
ချယ်ဆီးအသင်းရဲ့နည်းပြ ကွန်တီက ၀က်စ်ဘရွန်းအသင်းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အ်ိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်မှာ တစ်ခဲနက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကွန်တီဟာပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ၀က်ဖို့ဒ် ၊ ဘုန်းမောက်အသင်းတို့ကိုရှုံးနိမ်ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ ဖိအားတွေ ရှိနေခဲ့ပြီး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရဖို့ပင်သတင်းေ တွထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
၀က်စ်ဘရွန်းအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ ချယ်ဆီးအသင်းရဲ့ပရိသတ်များဟာ မိနစ်(၉၀)လုံး ကွန်တီရဲ့ နာမည်ကိုတောက်လျှောက်အော်ဟစ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာတော့ ကွန်တီက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဒါဟာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အသင်းမှာ သူ ဆက်ရှိနေဖို့ နားလည်ပေးနိုင်တာကိုပြသကြောင်း ဆိုပါတယ်။
Conte on Chelsea fan support: “ I have to tell thanks to the fans because from the start of my experience with Chelsea, they try to stay behind me in every game. They continue to do this. I am very happy and proud” #CFC
ကွန်တီကပြောကြားရာမှာ – “ ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ သူတို့ကျွန်တော့်ကို တစ်ခဲနက် အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောလဟာလတွေကို ကြားထားလို့ပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့သူတို့ကျွန်တော့်ကိုအားပေးကြတာကို ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တာဝန်ယူတဲ့ (၁၈)လတာကာလမှာ ပရိသတ်တွေကျွန်တော့်ရဲ့နေရာကို နားလည်ပြီး ကျွန်တော့်ဘက်ကလည်း
ချယ်ဆီးအသင်းအတွက်ပေးဆပ်ချင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ဒီလိုမျိုးခံစားမှုက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဘက်ကလည်း ကျွန်တော်နဲ့အတူထပ်မျှခံစားပြီး အသိအမှတ်ပြုတာအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ရော ကစားသမား တွေရော ပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ တခါတလေ လိုက်လုပ်နိုင်ပေမယ့်လည်း တခါတခါတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ ” လို့ ဆိုပါတယ်။
၀က်စ်ဘရွန်းအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ကစားသမားတွေပိုကောင်းလာကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဟာဇက်ရဲ့ သွင်းဂိုး (၂)ဂိုး ၊ မော့ဆက်ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ အနိုင်(၃)မှတ်ရခဲ့တဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ ကျေနပ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီးကောင်းလာပါ တယ်။ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။ (၂)ပွဲဆက် အရှုံးရလဒ်ကြုံတွေ့ပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ယုံ ကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၀က်စ်ဘရွန်းနဲ့ပွဲမှာ ပွဲစစချင်းခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ပွဲကိုထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးပြီး အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးခဲ့တယ်။ အနိုင်(၃)မှတ်ယူနိုင်ခဲ့တော့ ကောင်းတာ ပေါ့။ နောက်တစ်ပွဲမှာလည်း ဂိုးမပေးပဲနိုင်ပွဲထပ်ရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ” လို့ နည်းပြ ကွန်တီက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Home Football ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့ကွန်တီ